बर्षाले बुटबलमा फ्यानबाट पाइन् वैवाहिक जीवनका लागि अग्रिम् शुभकामना - LiveMandu
फिल्म ‘गोपी’को प्रचार प्रसारका लागि बुटबल आइपुगेकी वर्षा राउतलाई फ्यानले दुलही हुने शुभकामना दिएका छन् । फ्यानले केक काटेर शुभकामना दिँदै ब्राइड टु बिको गाउन समेत लगाइदिएका थिए । वर्षाकी फ्यानमध्येकी एक ममता शर्माले आफूले वर्षा राउतलाई विगत चार पाँच वर्षदेखि फलो गर्दै गरेको र विवाहको शुभकामना दिन सानो कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइन् ।
‘वर्षा दिदी हामी जस्तो धेरैको आदर्श हुनुहुन्छ । उहाँ नयाँ जीवन सुरु गर्न गइरहनु भएको छ । त्यसैले हामीले ब्राइड टु बि गर्ने प्रस्ताव राखेका थियौं जुन उहाँले सहर्ष स्वीकार्नु भयो । उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना,’ शर्माले भनिन् ।
वर्षाले ममता जस्तै देशभरका फ्यानको समूह रहेको र उनीहरुले विवाहको खबर सार्वजनिक भएसँगै ब्राइड टु बि गरौं है भनेर भनेको प्रस्तावलाई आफूले स्वीकारेको बताइन् ।
‘उहाँहरुको मायाले नै म यहाँ छु । म बुटबल आउँदैछु भन्ने थाहा पाएदेखि नै उहाँहरुले हामी यस्तो कार्यक्रम गर्छौं है भन्नु भएको थियो । यसलाई मैले उहाँहरुले दिएको शुभेच्छाको रुपमा बुझेको छु । उहाँहरुको आशिर्वाद लागोस्,’ वर्षाले भनिन् ।
फिल्मको ‘गोपी’को प्रचार गर्ने क्रममा वर्षाले फिल्मको पटकथा तथा चरित्र मन परेका कारण फिल्ममा अभिनय गरेको फिल्म दर्शकलाई पनि मन पर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसै गरी वर्षाले विवाह पछि पनि अभिनयलाई निरन्तरता दिने बताएकी थिइन् ।
‘म जुन घरमा विवाह गरेर जाँदैछु त्यो घरले कलाकारिताको मर्म मैलेभन्दा राम्ररी बुझेको छ । मलाई मन लागुञ्जेल अभिनयमा सक्रिय रहनेछु,’ वर्षाले भनिन् ।
अभिनेता तथा व्यवसायी सन्जोग कोइरालासँग फागुन २ मा भ्यालेन्टाइनको दिन विवाह गर्दैछिन् । दुवैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यही १४ फेब्रुअरी अर्थात् प्रेम दिवसको दिन विवाहको घोषणा गरेका हुन् । दुवै करिब ५ वर्षदेखि रिलेसनसिपमा थिए ।
Tags: गोपीवर्षा तथा सन्जोग विवाहवर्षा राउतसन्जोग कोइराला
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालद्वारा डा. आशा सिंहलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन
छाउपडी प्रथा विरुद्ध प्रहरीको सचेतना, पूर्वमिस नेपाल श्रृंखलाको साथ
मालपोत कार्यालय साँखु, काठमाडौंका नायब सुब्बा तथा लेखापढी व्यवसायी अख्तियारको नियन्त्रणमा
माघको खुलेको बिहानको जप
तेश्रो बिश्वयुद्ध शुरु भएको हो ?
घाँस काट्ने खुर्केर का गायकको निधन
फेसबुकका १५ वर्षहरु
Swami Vivekananda Thoughts and Quotes to Nourish Our Wisdom
healthHealth tipsIPL 2019KathmandulovemusicNepalNepal Tourism BoardThe Voice of Nepalvisit nepal 2020अमेरिकाइन्दिरा प्रसाईईरानकविताकाठमाडौंको बन्छ करोडपतिक्रिकेटचलचित्रचीनछठडा. निर्मलमणि अधिकारीद भ्वाइस अफ नेपालदिल्ली क्यापिटल्सनइ प्रकाशननई प्रकाशननरेन्द्र मोदीनरेन्द्रराज प्रसाईनिर्मल शर्मानेपालनेपालीपाकिस्तानपोखराप्रधानमन्त्रीफेसबुकबंगलादेशबेलायतभारतमुसलमानयुद्धविश्ववीरगञ्जश्रीलंकासन्दिप लामिछानेसुयोग ढकालस्वास्थ